एमाले प्रदेश सदस्यलाई माओवादी सुनसरी जिल्ला संयोजक बनाएको भन्दै प्रदेश पार्टी कार्यालय तालाबन्दी » PradeshReport.com
होम पेज » राजनिति » एमाले प्रदेश सदस्यलाई माओवादी सुनसरी जिल्ला संयोजक बनाएको भन्दै प्रदेश पार्टी कार्यालय तालाबन्दी
एमाले प्रदेश सदस्यलाई माओवादी सुनसरी जिल्ला संयोजक बनाएको भन्दै प्रदेश पार्टी कार्यालय तालाबन्दी
प्रकाशित : १७ आश्विन २०७८ १६:४९
आश्विन १७, २०७८ – नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्रदेश कमिटिले १५ गते गरेको परिपत्र प्रति आपत्ती जनाउँदै सुनसरी कमिटिले प्रदेश पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ ।
सुनसरी कमिटिले पार्टीको विधि र पद्धतीलाई कुल्चदै गुटगत आधारमा जिम्मेवारी दिएको भन्दै प्रदेश पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ । सुनसरी पार्टी आन्दोलनमा निरन्तर कृयाशिल नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँदै गुटगत आधारमा जिम्मेवारी दिँदै पार्टीलाई ध्वस्त गर्ने प्रदेश कमिटिको निर्णय फिर्ता गर्न माँग राखेको छ । उक्त माँग पुरा नभएसम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुनसरी समन्वय समितिले प्रदेश पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको विज्ञप्ती मार्फत समितिले जानकारि गराएको छ ।
प्रदेश कमिटिले सुनसरी समन्वय समितिको संयोजक योगेन्द्र प्रसाद मण्डल पप्पुलाई विनाकारण पदबाट हटाइ केहि दिन अगाडी मात्र नेकपा एमालेको प्रदेश सदस्यमा मनोनित भएका सुरेन्द्र मेहतालाई सुनसरी जिल्ला संयोजक बनाएको उक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेकपा एमालेको प्रदेश सदस्यमा मनोनित भएका मेहताले केहि दिनमै कुनै पार्टीमा नरहेको भन्दै विज्ञप्ती जारि गरेका थिए । यो विवादको विषयमा जिल्लाका एक जिम्मेवार नेतासँग कुरा गर्दा उनले मेहता विगतमा केपी ओलीको प्रतिगमन विरोधमा भएको आन्दोलनमा समेत सामेल नभएको र उनि एमाले पार्टीमा प्रवेश गरेको बताए । उनले भने मेहता एमालेको प्रदेश सदस्य हुन उनले केहि समय पछि कुनै पार्टीमा नरहेको भनेका छन कसरी माओवादी केन्द्रको जिल्ला संयोजक भए ? विधि र पद्धतीको कुरा गर्ने प्रदेश कमिटि कहाँ चुक्यो ? भन्दै प्रदेश कमिटिको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
PrevPreviousअखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा पञ्चा सिंह चयन, अखिल क्रान्तिकारीको इतिहासमा महिला अध्यक्ष पहिलो
Nextश्रीलंकाविरुद्धको खेल सहज नभए पनि जित निकाल्छौँ – अलमुताइरीNext